biggest ၏ကြောင်တောင်တောင် အူကြောင်ကြောင် စိတ်ကူးလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြပါရစေ။ ကဲ. . . စပြီ
ကောင်း ။ ။ အခုလို ခေတ်မှီနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပြီး မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းကိုဖြစ်နေပြီ။
မကာင်း ။ ။ ကွန်ပျုတာ ပေါ်လာတဲ့အတွက် လူတွေဦးနောက်ကို သိပ်မသုံးချင်ကြတော့ဘူး။ ဥာဏ်ထိုင်းလာကြတယ်။ biggest အပါအဝင်ပေါ့။ အခုဆို ၂ နဲ့ ၇ ပေါင်းဖို့ကိုတောင် ဦးနောက်ကို သိပ်မသုံးချင်တော့ဘူး။ ကွန်ပျုတာဖွင့်ပြီး Excel ထဲမှာ သွားပေါင်းရတဲ့ အဆင့်ထိရောက်နေပြီ။ အဲဒီလောက်ကို biggest တို့ကဆိုးဝါးနေတာ. . .
ကောင်း ။ ။ ပျင်းနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူကအကောင်းဆုံး အဖော်မွန်ပါဘဲ။
မကောင်း ။ ။ တစ်ခါက ကောင်လေးတစ်ယောက် မျိုးကြီးသီချင်းဖွင့်ထားတာ သူရှေ့က ၄၊ ၅ လှမ်းလောက်ကွာတဲ့ biggest တောင် အကုန်ကြားနေရတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ရုပ်ကလေးသနားးကမားနဲ့ သနားပါတယ် နားလေးနေရှာပြီ. . .
ကောင်း ။ ။ ဆက်သွယ်ရေးမှာ သူမရှိလိုကို မဖြစ်ဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ အရာဘဲ။ (ဒါမှ ဆက်သွယ်ရေးက စားပေါက်မပိတ်မှာပေါ့နော်)
မကောင်း ။ ။ မကောင်းတာက လူကတစ်နေကုန်ပင်ပန်းပြီး အိပ်ချင်နေပြီ မှေးခနဲ့ အိပ်ပျော်တုံး ရှိသေးတယ် ကလင် ကလောင်နဲ့ မြည်လာပြီ။ နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းဆီက ကိုယ်နိုင်ငံမှာ ည သူနိုင်ငံမှာက နေ့ ဖြစ်နေတာက ပြဿနာ။ အိပ်ပြီလား အစောကြီးဘဲ ရှိသေးတယ်တဲ့ ကိုယ်ဆီမှာည ၁၂ နာရီက သူဆီမှာနေ့ ၁၂ နာရီ သေရော။ ပြန်ဟောက်ရအောင်လည်း တစ်ခါတရံမှ ဆက်တဲ့သူငယ်ချင်း အားတဲ့အချိန်လေးဆက်ရတာပါတဲ့။ ကဲမထူးတော့ဘူး. . . သူတောင် ဖုန်းခ အကုန်ခံနိုင်သေးတာဘဲ ပြောပေးလိုက်မယ် ကိုယ်ကအလားကားပြောရတာကို။ အဲဒီလိုနဲဘဲ တစ်ခါတရံမှ ဆက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက များလာတော့ သေတာဘဲ။ ဖုန်းပိတ်အိပ်ပေါ့လို အကြံမပေးနဲ့။ ပိတ်အိပ်ဖူးတယ်။ ကံကောင်းလို အိမ်ပေါ်ကမဆင်းရတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲ ပြောပြမယ်။ တစ်ခါ biggest အဖေနဲ့အမေ မွေးနေ့ပွဲသွားတာ biggest တော့ပင်ပန်းနေလို့လိုက်မသွားတော့ဘူး။ အခန်းထဲမှာ အိမ်တံခါးပိတ်ပြီး အဖေနဲ့အမေ ကိုစောင့်ရင်းအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ။ ကံကောင်းလို့အိမ်မပြိုတယ်။ ပါးစပ်နဲ့မတိုးလို့ ဘေးအိမ်တွေကပါ ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ပြီး နိုးပေးရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားရတယ်။ အဲဒါ ဖုန်းပိတ်ပြီး အိပ်တဲ့ အကျိုးပေါ့။
ကောင်း ။ ။ အချိန်က လူ့ဘဝ အတွက်အရေးကြီးဆုံးဘဲကိုး။ biggest ဆို အပြင်သွားရင် နာရီ မပါရင်ကို မသွားတက်တော့ဘူး။
မကောင်း ။ ။ တစ်ခါက အလှုတစ်ခုသွားတယ်။ လူကလည်း အပျံစားပေါ့။ ရှိုးအပြည့် ဂိုက်အပြည့်ဘဲ။ အလှုမှာ စားသောက်ပြီး စကားစမြည်ပြောနေကြတာပေါ့။ အဲဒီမှာ အလှုကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်က biggest မှာ နာရီပတ်ထားတော့ လာမေးတာပေါ့။ "ဘယ်နှစ်နာရီ ရှိပြီလဲတဲ့" ကိုယ်မှာနာရီပတ်ထားလို့ နာရီလာမေးတာ သူ့အပစ်မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကို လှချင်လို့ ပတ်သွားမိတဲ့ ရွှေနာရီ မနက်အိမ်က ထွက်ကတည်းကရပ်နေတာ သတိမထားမိဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုဘဲ တိုင်နဲ့ခေါင်းနဲ့သာ ပြေးစောင့်ချင်တော့တယ်။ လူတော်တော်များများကလည်း နာရီမပါဘူး။ အလှုအိမ်မှာကလည်း တိုင်ကပ်နာရီတောင် မရှိဘူး။ လူတွေအားလုံးက အချိန်သိချင်တော့ဝိုင်းကြည့်နေကြတာပေါ့။ အဲဒီတော့လည်း ရီကျဲကျဲနဲ့ ရှေ့မျက်နှာ ရှေ့မှာထားပြီးတော့ဘဲ ရှိသမျှသွားအကုန်ထုတ်ပြီး "ဟီး ဟီး နာရီရပ်နေတယ်" လို့ဘဲပြောလိုက်ရတာတပေါ့။ ကဲ လှချင်တာ မှတ်ပြီလားဘဲ. . .
ကောင်း ။ ။ အမှတ်တရလေးတွေကို hard copy အနေနဲ့ တသက်လုံး သိမ်းထားနိုင်တာပေါ့။
မကောင်း ။ ။ မကောင်းတာက. . . ရုပ်ချောတဲ့ လူတွေအတွက် တော့ သူတို့ ဓါတ်ပုံတွေကို လူတိုင်းကိုထုတ်ပြနိုင်တာပေါ့။ လှတာကိုး။ biggest တို့လို ရုပ်ဆိုးတဲ့ လူတွေက သူများကို ပြဖို့နေနေသာသာ ကိုယ်ဓါတ်ပုံကိုယ်တောင် ရဲရဲမကြည့်ရဲဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် biggest သရဲမကြောက်တက်တာလည်းပါမယ်ထင်တယ်။ မှန်နဲ့သရဲကို တစ်နေ့နှစ်ခါလောက်ကြည့်ကြည်နေရတော.